Graceful Friends – Alpha Premium
Original name우아한 친구들
StarringBae Soo-bin, Han Da-gam, Jeong Seok-yong, Kim Hye-eun, Kim Ji-young, Kim Sung-oh, Song Yun-ah, Yu Jun-sang
Synopsis of Graceful Friends
မွို့လေးတဈမွို့မှာ သူငယျခငျြးတှရှေိကွတယျ..သူတို့က ငယျသူငယျခငျြးတှဖွေဈတဲ့အပွငျ အိမျထောငျကပြွီးတဲ့နောကျလညျး ဒီမွို့မှာပဲအခွခေဖြွဈတာဆိုတော့ အလုပျကိုယျစီလုပျလိုကျ အားရငျ သူငယျခငျြးအရငျးတှဆေိုတော့ ဆုံပွီး စားသောကျကွပေါ့… ဒီလိုပဲဖွတျသနျးနတေဲ့ သူတို့ဘဝဟာ တကယျ့ကို သုခဘုံလို့ဆိုရမလားပဲ…
အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ ဒီမွို့မှာပဲ ထူးဆနျးတဲ့လူသတျမှုတဈခုဖွဈသှားခဲ့တယျ…
ဒီလူသတျမှုဟာ ဟိုးအတိတျသူတို ငယျစဉျကာလနဲ့ဆကျစပျမှုရှိတဲ့အပွငျ
သရုပျဆောငျတှအေတျောမြားမြားဟာ အခွားစီးရီးတှမှောဆို အဓိကကတြဲ့ဗီလိနျခနျးတှမှော ပါတဲ့သရုပျဆောငျတှဖွေဈတဲ့အပွငျ သရုပျဆောငျမှုအပိုငျးမှာလညျး ဆရာကတြဲ့သူတှခေညျြးပါပဲ…ပွီးတော့ လူသတျမှုနဲ့ဆကျစပျပွီးတဲ့နောကျ ကိုယျစီ စိတျခံစားမှုကွောငျ့
ရုနျးကနျတဲ့ ဉာဏျနီဉာဏျနကျတှကေို စိတျလှုပျရှားစှာ ကွညျ့ရတဲ့စီးရီးမို့ ခဈြကွိုကျမုနျး တှငွေီးငှတေဲ့သူတှအေဖို့တော့ တျောတျောကွီးမိုကျမှာသခြောပါတယျ….
မြို့လေးတစ်မြို့မှာ သူငယ်ချင်းတွေရှိကြတယ်..သူတို့က ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အပြင် အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်လည်း ဒီမြို့မှာပဲအခြေချဖြစ်တာဆိုတော့ အလုပ်ကိုယ်စီလုပ်လိုက် အားရင် သူငယ်ချင်းအရင်းတွေဆိုတော့ ဆုံပြီး စားသောက်ကြပေါ့… ဒီလိုပဲဖြတ်သန်းနေတဲ့ သူတို့ဘဝဟာ တကယ့်ကို သုခဘုံလို့ဆိုရမလားပဲ…
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဒီမြို့မှာပဲ ထူးဆန်းတဲ့လူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်…
ဒီလူသတ်မှုဟာ ဟိုးအတိတ်သူတို ငယ်စဉ်ကာလနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့အပြင်
သရုပ်ဆောင်တွေအတော်များများဟာ အခြားစီးရီးတွေမှာဆို အဓိကကျတဲ့ဗီလိန်ခန်းတွေမှာ ပါတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာလည်း ဆရာကျတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ…ပြီးတော့ လူသတ်မှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်စီ စိတ်ခံစားမှုကြောင့်
ရုန်းကန်တဲ့ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ကြည့်ရတဲ့စီးရီးမို့ ချစ်ကြိုက်မုန်း တွေငြီးငွေ့တဲ့သူတွေအဖို့တော့ တော်တော်ကြီးမိုက်မှာသေချာပါတယ်….
ProductionJTBC Studios, Studio & New
Firt air date2020-07-10
Last air date2020-09-05
Home PageGraceful Friends
1 Graceful Friends - Season 1
Graceful Friends 1x1 2020-07-10